MA Lock - MT4 Muujiyeyaasha
Home MT4 Muujiyeyaasha MA Lock
tilmaame Tani waxay kaa caawin doonaa qeexo MA (Celceliska guurista) for one specified timeframe only.
Markii wakhti badala, tilmaamahan si toos ah habaysaa ay goob cayiman oo cusub haddii ay suurtogal tahay. Fikradda waa “Kaliya waxaan doonayaa in aan arko sida MA(8) ka H1 markii aan hadda ahay on M15” ama “Kaliya waxaan doonayaa in aan arko sida MA(100) ka M15 markii aan hadda ahay on H4” .
MA Lock waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka Tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda ururay.
MA Lock siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo MA Lock.mq4?
Nuqul ka MA Lock.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha MA Lock.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar MA Lock.mq4 4 Chart?
Next articleAlpha Trend Spotter PA Free